क्याप्टेनको रवाफ - चलचित्र - साप्ताहिक
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला किन र केका लागि ? यो प्रश्नको सबै जवाफ नेपाली चलचित्र क्याप्टेनले दिन्छ ।’ मंगलबार साँझ ‘क्याप्टेन’ को विशेष प्रदर्शनीपछि अभिनेत्री तथा सामाजिक अभियन्ता कुञ्जना घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया हो यो ।
बुधबार दिउँसो साप्ताहिकले चलचित्रका निर्माता भुवन केसीसँग मंगलबारसम्मको चलचित्रको व्यवसायका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको थियो । ‘नेपाल जस्तो चलचित्रको सानो बजार भएको देशमा सीमित बजेटमा निर्माण गरिएको चलचित्रले आजका मितिसम्म उत्कृष्ट व्यवसाय गरिरहेको छ, केसीको भनाइ छ– ‘बुधबार दिउँसोसम्म पनि काठमाडौंसहित देशैभरीका सिनेमा हलमा दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति छ भन्ने रिपोर्ट पाएको छु । हाम्रो चलचित्र दसैं–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा प्रदर्शन भएको होइन, आजसम्म जति दर्शकले हेर्नु भएको छ, सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नु भएको छ । चलचित्रले ठ्याक्कै कति आम्दानी गर्न सकेको छ भन्ने रिपोर्ट चाहिं मैले पनि प्राप्त गर्न बाँकी छ । यद्यपि शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चलचित्रले साढे दुई करोड रुपैयाँको व्यवसाय गरेको वितरक मनोज राठीबाट जानकारी पाएको छु ।’
भुवन केसीले भने जस्तै यो साता सिनेमा हलहरूमा चलचित्र क्याप्टेन र अनमोल केसीको क्रेज लोभलाग्दो देखियो । फुटबल खेलका बारेमा हालसम्म एउटा पनि नेपाली चलचित्र निर्माण नभएको अवस्थामा क्याप्टेनले अनमोलका प्रशंसकहरूलाई मात्र होइन फुटबलका प्रशंसकहरूलाई समेत सिनेमा हलतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ ।
अघिल्लो बुधबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको असामयिक निधनपछि बिहीबार गर्ने भनिएको चलचित्रको विशेष प्रदर्शन मंगलबारलाई सारिएको थियो । अधिकारीको निधनले बिहीबार तथा शुक्रबार देश नै शोकमग्न भएको प्रभाव शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रमा पनि पर्‍यो । शुक्रबार बिहानीको शोमा दर्शकको संख्या कम देखियो । यद्यपि, शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि चलचित्रको व्यवसायले गति लियो । शनिवार काठमाडौंसहित देशभरीका सिनेमा हल करिब–करिब हाउसफूल नै रहे । आइतबार औसतभन्दा राम्रो रहेको व्यवसायले सोमबार शिवरात्रीको दिन शनिवारको जस्तै राम्रो व्यवसाय गर्‍यो ।
क्याप्टेनका वितरक मनोज राठीले यो चलचित्रको अघिल्ला तीन दिनको व्यवसायिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् ।
राठीका अनुसार चलचिक्रले शुत्रबार, शनिबार तथा आइतबार देशभरीबाट २ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ । राठीले छक्का पञ्जा–३ पछि क्याप्टेनको आम्दानी सर्वाधिक रहेको दाबी समेत गरे । वितरक राठीका अनुसार क्याप्टेनले पहिलो दिन ६५ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो भने दोस्रो दिन १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तेस्रो दिन भने यसले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको छ । वितरक राठीले शिवरात्रीको दिन पनि चलचित्रले एक करोड रुपैयाँ बराबरकै व्यवसाय गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार यो चलचित्रलाई काठमाडौंमा मात्र होइन, मोफसलमा पनि उत्तिकै मन पराइएको छ ।
कस्तो छ चलचित्र ?
यसअघि चलचित्र ऐश्वर्यबाट आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका निर्देशक दीवाकर भट्टराईले क्याप्टेन मार्फत आफ्नो साख जोगाउने हिसाबको काम गरेका छन् । चलचित्रको कथा सामान्य छ । बुवा (सरोज खनाल) को राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी बन्ने सपना पुरा हुन नसकेपछि उनले छोरा इशान खड्का (अनमोल केसी) लाई त्यो स्तरको खेलाडी बनाउने सपना देख्छन् । त्यही सपना पूरा गर्न छोरा इशान खड्काले गरेको संघर्षको कथा हो– क्याप्टेन । प्यारालाइसिसले थलिएका बुवाको उपचार गर्न धनको अभाव भएपछि काठमाडौंका घरका भित्ता रंगाउने क्रममा इशानमाथि एउटा फुटबल क्लबका कोच (प्रशान्त ताम्राकार) को नजर पर्छ ।
उक्त क्लबमा आवद्ध हुँदै इशानले आफ्नो क्लबलाई ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । आफ्नो कडा मेहनतले ईशान नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमको सदस्यमात्र बन्दैनन्, परिस्थितिबस क्याप्टेनको भूमिकामा प्रस्तुत भएर साफ फुटबलमा नेपाली टिमकै नेतृत्व समेत सम्हाल्छन् । चलचित्रको क्लाइमेक्समा ईशान र ईशानका बुवाले देखेको सपना कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुरालाई रोचक शैलीमा चित्रण गरिएको छ ।
यो चलचित्रको सांगीतिक पक्ष सवल भए पनि प्राविधिक पक्षमा निर्देशक भट्टराई चुकेका छन् । कतिपय दृश्यको स्वरांकन फितलो छ । नेपाल र भारतको फाइनल खेलको दृश्यमा गरिएको भिएफएक्सका दृश्य त्यति प्रभावकारी लाग्दैनन् ।
अभिनयका दृष्टिकोणले अनमोल केसी र सरोज खनालले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । दुई नयाँ अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी तथा प्रियंका एमभीले पनि आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गरेका छन् । शहरीया युवतीको भूमिकामा प्रियंका औषत देखिए पनि गाउँकी उपासना दर्शकको मनमा बस्न सफल छिन् ।
१ करोड ८० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको यो चलचित्रले लगानी सुरक्षित गर्न मात्रै झण्डै छ करोड रुपैयाँको व्यवसाय गर्नुपर्छ । चलचित्र हेर्नेहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका कारण सिनेमा हलमा दर्शकको फ्लो बढेको देखिन्छ । आज शुक्रबार ठूलो बजेटको कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शनमा नआउनुको फाइदा क्याप्टेनले उठाउने कुरामा निर्माता भुवन केसी ढुक्क देखिन्छन् ।